Strong M6.1 Inyikima yamatye e-Peru-Ecuador Umda weBorder
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zasePeru » Strong M6.1 Inyikima yamatye e-Peru-Ecuador Umda weBorder
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zase-Ecuador zokuPhula • iindaba • Iindaba zasePeru • Xanduva • Safety • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • Iindaba ezahlukeneyo
Kwezo ndawo, ukushukuma komhlaba okuyingozi kwenzeka kunye namandla okuba nomonakalo olinganiselweyo kumonakalo omkhulu kwizakhiwo nakwezinye izibonelelo.
Inyikima yahlasela kufutshane naseSullana.
Inyikima yavakala ePeru nase-Ecuador
Akukho ngxelo zokonzakala okanye zomonakalo ezikhoyo okwangoku.
Inyikima enkulu i-Strong Magnitude 6.1 yabetha kufutshane naseSullana, eProvincia de Sullana, ePiura ePeru.
Le nyikima yabetha kubunzulu obungamazantsi eekhilomitha ezili-10 phantsi kwentsika engaseSullana, eProvincia de Sullana, ePiura, ePeru, malunga nasemini emaqanda ngolwe-30 kuJulayi wama-2021 ngo-12: 10 ngokuhlwa. Iinyikima zomhlaba ezinzulu zivakala ngamandla ngakumbi kunezinzulu njengoko zisondele kumphezulu womhlaba. Ubungakanani ngqo, inyikima, kunye nobunzulu benyikima bunokuhlaziywa kwiiyure ezimbalwa okanye kwimizuzu elandelayo njengoko iingcali zenyikima ziphonononga idatha kwaye zicokisa ukubala kwazo.
Iingxelo ezimbini ezikhutshwe liZiko loPhando laseJamani leGeosciences (GFZ) kunye ne-European-Mediterranean Seismological Centre (EMSC) zidwelise inyikima njengobukhulu be-6.1.
Ngokusekwe kwidatha yokuqala yenyikima, inyikima bekufanele ukuba iviwe ngumntu wonke kwindawo yengqokelela yenyikima. Kwezo ndawo, ukushukuma komhlaba okuyingozi kwenzeka kunye namandla okuba nomonakalo olinganiselweyo kumonakalo omkhulu kwizakhiwo nakwezinye izibonelelo.
Ukunyikima okuphakathi kusenokwenzeka ukuba kwenzeke eSullana (pop. 160,800) ebekwe kwi-15 km ukusuka kwindawo ephambili, iQuerecotillo (pop. 25,400) i-16 km kude, iMarcavelica (pop. 25,600) i-18 km kude, iTambo Grande (pop. 30,000) 24 km kude, ePiura (pop. 325,500) 28 km kude, San Martin (pop. 130,000) 29 km kude, Catacaos (pop. 57,300) 38 km kude, kunye neChulucanas (pop. 68,800) 47 km kude.
I-WTTC: ISaudi Arabia iza kubamba umsitho we-22 wehlabathi elizayo...
I-US NAVY: Ukusela Amanzi eHawaii ukuba abe netyhefu ...